Accueil > Gazetin'ny nosy > Mapar sy TGV : Mihamafy ny ady an-trano
Mapar sy TGV : Mihamafy ny ady an-trano
Tsy azo afenina intsony ny ady an-trano mitranga ao anatin’ny fitondrana tarihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Ady an-trano nanomboka hatrany amboalohany ny fitondrana no nitranga hatramin’izao nohon’ny antony maro. Hatrany amin’ny mpikambana avy any amin’ny fokontany ka tonga hatrany amin’ny birao politika ary tonga hatrany amin’ny minisitra. Tsy misy raharahan’antoko intsony ataon’ny TGV (Tanora Malagasy vonona), mifandrafy ny samy IRD (isika distrika miaraka amin’i Prezidà Rajoelina) ary korontana no misy ao amin’ny Mapar (Miaraka amin’i Prezidà Rajoelina). Mifanenjika an-toerana ary mifangala-baraka koa aza. Mpanao bizina sy asa maloto no tazana sisa avy aty ivelany. Voafitaka tanteraka ingahy Rajoelina.
Ny any amin’ny governemanta indray dia tsy misy intsony izany antoko manohana an’i Rajoelina fa mpanao afera no ankamaroany. Samy mitondra ny lohany miarony tombotsoany.
Tsy faly amin’ny lehiben’ny TGV sy ny MAPAR ary ny IRD ny mpikambana any any fokontany. Be dia be no tofoka sy kivy noho ny toetran’izy ireny. Mifampiandry amin’ny kendritohana ireo mpomba ny fanjakana ankehitriny.
Hoa’ny depiote sy ny senatera ary ny minisitra izay voafidy sy voatendry amin’izao fotoana izao dia tsy misy miraharaha intsony ireo vahoaka izay nametraka azy teo amin’ny toerany. Mandositra sy miala pà isakin’ny hatonin’ireo mpikambana ao aminy.
Noho izany dia mihena dia mihena ny mpomba an’ingahy Rajoelina amin’izao fotoana izao. Sarotra ho an’ity antoko ity ny fifidianana amin’ny 2023 raha mitohy izao ady an-trano izao.
Ravalomanana : Omen’ny mpitondra sasany vahana
Fetin’ny faran’ny taona : Fandrebirebena saim-bahoaka efa ory
Kianja Barea : Mety hogiazan’ny Sinoa
Tsy maty manota : Tsy ho foana ao anatin’ny repoblika faha-4
COVID-19 : Variant Omicron Mampanahy ny sidina avy any Frantsa
Vondrona eraopeana : Izy mangalatra ny antsika indray no avo vava
Inty sy nday : “Aza variana mijery bazary”
Karatra fisotroandronono vaovao : Voafitaka hatrany ireo Beantitra
Ady amin’ny Covid-19 : Tsy hita izay nalehan’ireo vaksiny Pfizer